प्रदीप बस्नेत काठमाडौं, २८ फागुन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताको औचित्य के हो ? तपाईंहरूले भनेको वैकल्पिक शक्ति कसरी निर्माण हुन्छ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०४६ सालदेखि नै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आएको हो । २०५१ सालको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको १९ प्रतिशत मत ल्याएर राप्रपा तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा आएको हो । विगतमा विभिन्न कारणले पार्टी विभाजित भयो । विभाजनको सिकार हामी मात्र नभएर अरू पार्टी पनि भए ।
तर, पार्टी टुटफुटको रेकर्ड भने राप्रपाले नै राख्यो । यो हाम्रो कमजोरी हो । अहिलेको स्थितिमा राजनीति जनतामा केन्द्रित नभएर सत्तामा केन्द्रित भयो । सत्तामा भएको पार्टी बलियो बनाउने र पैसा कमाउने ध्यानमा राजनीतिक दल लागे । नेताहरू जनताले दिएको म्याडेन्टलाई भुलेर जति सक्यो पैसा कमाउनतिर लागे । यसले देशमा ठूलै विकृति भित्र्यायो ।
वैकल्पिक शक्ति त नयाँ शक्तिमार्फत जन्मिने हो । तपाईंहरूमाथि लाग्ने आरोप पहिले नै परीक्षण भएको पूर्वपञ्चहरूको समूह जसको राजनीतिक शक्ति गुम्दै गइरहेको छ भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा कसरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ ?
प्रजातन्त्रमा देशमा बढेको राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिपक्षले हो । तर, अहिलेको प्रतिपक्ष यति भलाद्मी छ कि यसलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
जनताको नाममा शक्ति आर्जन गर्ने र प्रशासनमा आफ्ना मान्छे राखेर पैसा कमाउने अधिनायकवादी चरित्र अहिलेको सरकारमा देखिएको छ । यसलाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति अहिले छैन ।
राप्रपाको देशभर नै सङ्गठन छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विश्वास गर्ने राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी मानिसहरू निरीह भएर अरू पार्टीलाई समर्थन गरेर बसेका छन् ।
आफ्नो पार्टी फुटेको र देशभर नै सङ्गठित हुन नसकेका कारण उनीहरूले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ती सबै शक्तिलाई जगेर्ना गर्दै अहिले भइरहेको राजनीतिक अधिनायकवाद र आर्थिक शोषणलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले नियन्त्रण गर्न जनतालाई जागृत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
तर, शक्तिको स्रोत भनेको जनता हो । जनतामा जनविश्वास जागृत गर्ने काम तपाईंहरूबाट कसरी सम्भव हुन्छ ?
हाम्रो शक्ति छिन्नभिन्न भएको थियो । राप्रपा त्यो हो, जसले विगतको चुनावमा १९ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कलहले गर्दा कार्यकर्ता निराश भएर बसेका थिए । हामी एक भएर जाँदा छिन्नभिन्न भएको शक्ति फेरि जुर्मुराएर उठ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसको दबदबा छ । देशभर उनीहरूको बलियो पक्कड छ नि !
नेकपा र कांग्रेसको के दबदबा छ र ? नेकपाको शोषणको दबदबा छ । ७० करोड रूपैयाँ घूस खाने कुराको दबदबा छ । त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो भ्रष्टाचारको राजनीतिले जनता वाक्क भएका छन् ।
माथिदेखि तलसम्म लथालिङ्ग छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सबैतिर भ्रष्टाचार बढेको छ । यो अराजकताको विरूद्धमा बोल्ने शक्ति अहिले चाहिएको छ ।
तपाईंले हामीलाई पुरानै हौ भन्नुहुन्छ । हो, म बूढो भएँ तर प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफू शक्ति र सत्तामा हुँदा कहाँनिर के दुरूपयोग गर्‍यो ? मैले के बेइमानी गरेँ, कसैले देखाइदेओस् । म चुनौती दिन्छु ।
तपाईंको पार्टीमा न विचारको विकास भयो, न त नेतृत्वको विकास हुन सक्यो । पार्टीमा नयाँ नेता नै देखिँदैन । नयाँ पुस्तालाई आशा देखाउने नेता खोइ ?
नेतृत्व विकास भन्ने कुरा पार्टी सङ्गठित भएर गएपछि आउँछ । अहिले पनि हामीसँग भएका युवा नेताहरूलाई हेर्ने हो भने आशा गर्ने थुप्रै ठाउँ छ ।
नेपालगञ्जका मेयर धवलशमसेर राणाले जति अरू कुन मेयरले काम गरेका छन् ? नेपालगञ्जलाई नमुना शहर बनाउन उनले गरेका काम हेर्नुहोस् ।
एक जना मात्रै भए पनि संघीय संसदमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको भूमिका हेर्नुहोस् । नयाँ नेतृत्व आइरहेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हाम्रो पार्टीमा क्वालिटीका नेताहरू छन् । अरू पार्टीमा कसलाई आशा लाग्ने नेता देख्नुहुन्छ ?
स्पस्ट बहुमतका साथ एउटै पार्टीको निर्वाचित सरकार छ । प्रतिपक्षलाई संसद छ । तपाईंहरूले खेल्ने भूमिका कहाँ हो ? तपाईंहरूसँग न संसदमा प्रभाव राख्ने मत छ, न त राष्ट्रिय रूपमा ठूलो सङ्गठन नै छ । अहिले नै नयाँ शक्ति वा वैकल्पिक शक्ति किन आवश्यक पर्‍यो ?
हामी विगत १ वर्षदेखि पार्टी एकीकरण र वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागिरहेका थियौँ । विगतमा ३ वटा पार्टी ३ उम्मेदवार लगेर हामी जनताबीच गयौँ ।
स्वाभाविक रूपमा हामी विभाजित भइसकेपछि जनताको हामीप्रतिको विश्वास कायम हुन सकेन । आफ्नै मान्छेले पनि तपाईं हार्नुहुन्छ, भोट किन दिने भनेर हामीलाई सहयोग गरेनन् ।
अब हामी एक भएका छौँ । हामीबीच दृष्टिकोण प्रस्ट भएको छ । हाम्रा मुद्दा मिलेका छन् । सरकारको अराजकता, भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिलाई हामी जनताका बीचमा लिएर जान्छौँ । यो काम संसदको प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्षको काम अब हामीले गर्छौं । हामी जनताको बीचमा जान्छौँ र जनताकै बलबाट हामी फेरि आउँछौँ । हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ ।
तत्कालीन राप्रपा नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको विपक्षमा थियो । तपाईंहरूले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीमार्फत् गणतन्त्रमा भोट हाल्नुभयो । तपाईंहरू अब संवैधानिक राजतन्त्रमै फर्केको हो ? तपाईंहरूको अब राजनीतिक एजेण्डा के हो ?
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी हुँदा पार्टीको निर्णयअनुसार मैले गणतन्त्रमा भोट हालेकै हो । तर, हामीले विगत ७–८ वर्षमा राष्ट्रपतिको पदको गरिमा कायम भएको देखेनौँ । अहिलेको राष्ट्रपतिको पद पार्टी र पार्टीभित्रको गुटको पद जस्तो भयो । राष्ट्रपतिको पद पार्टीको गुट संरक्षण गर्न प्रयोग भएको छ ।
राष्ट्रपतिले (संस्था) संसदीय मामिलाका मूल्य र मान्यतालाई समेत आफ्नो दलको स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको छ । नेपालमा सबैले स्वीकारेको देशको स्थायित्वका लागि आलङ्कारिक राजसंस्था नै चाहिन्छ भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौँ ।
उसो भए राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका तर्फबाट गणतन्त्रमा गरेको मतदानप्रति आत्मालोचना गर्नुहुन्छ ?
म त्यसबेला पनि हतारमा थिइनँ । नयाँ संरचनाले कसरी काम गर्छ, हतार नगरी पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । तर, पार्टीले निर्णय गर्दा व्यक्तिको केही लाग्दैन । पार्टीले नै निर्णय गरेपछि मैले गणतन्त्रका पक्षमा भोट हालेँ ।
यो त नयाँ शक्तिको नाममा प्रतिगमनतिरको यात्रा पो भयो त, होइन र ?
प्रतिगमन भनेको के हो ? नयाँ संविधान बनेपछि कति पटक संशोधन भयो ? महिना दिनभित्रै संशोधन भएको छ । यो संविधानले गणतन्त्रको आलोचना गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । यसरी मुलुक चल्दैन ।
राष्ट्रपति पदको मर्यादा पनि राख्न नसक्ने गणतन्त्र किन चाहियो ? प्रतिगमन अहिले यो सरकारले गरिरहेको छ । नेपालको राज्यशक्तिलाई जनताको शोषण गर्न अधिनायकवादी बन्ने चरित्र बोक्ने यो सरकार प्रतिगामी हो । हामी कसरी प्रतिगामी ?
गणतन्त्र आउने र राजसंस्था जाने सामान्य परिस्थिति थिएन । माओवादीको सशस्त्र बिद्रोह, १९ दिने जनआन्दोलन र सीमान्तकृत वर्ग, जाति, समुदायको संयुक्त आन्दोलनबाट आएको हो गणतन्त्र । त्यो आन्दोलन जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय विभेद अन्त्यका निम्ति भएको थियो नि !
त्यसो भए प्रचण्डजीले २०६२/०६३ भन्दा अगाडि बोलेका भाषण र लेख पनि हेर्नुहोस् न त । उहाँ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुभएको छ ? वैदेशिक सहयोग नलिने, सबै उद्योग राष्ट्रियकरण गर्ने र सरकार चलाउने भन्नुहुन्थ्यो । कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू ? कुन ठाउँमा आइपुग्नुभा’छ उहाँहरू ?
अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा के खाँचो त्यो हेर्नुहोस् । गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रूपैयाँ प्रकरण आउँदा प्रधानमन्त्रीले उल्टै बाँस्कोटा निर्दोष छ भन्नु अग्रगमन हो ? इसाईको प्रचारका लागि सारा कार्यकर्तालाई काठमाडौं ल्याएर होली वाइन खुवाउनु अग्रगमन कि प्रतिगमन हो ? प्रतिगमन शब्द प्रयोग गर्दा अलिक विचार गर्नुहोस् ।
धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अब पार्टीको धारणा के हुन्छ ?
सबै धर्मको सम्मान गर्छौं तर नेपालको पहिचान हिन्दु नै हो । ९० प्र्रतिशतभन्दा बढी ॐकार परिवार भएको देशमा हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्नु के नराम्रो हो ? ६० प्रतिशत क्रिश्चियन भएको देशमा बेलायतको प्रधानमन्त्रीले हामी क्रिश्चियन राष्ट्र हौँ भनेर गर्व गर्ने, हामीचाहिँ लाज मान्ने ? ५ हजार वर्षको सभ्यता बोकेका हामी लघुताभाष मानेर बस्ने ?
राज्यको धर्म हुनुहुँदैन । राज्य धर्ममा निरपेक्ष बस्नुपर्छ भनेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ नि ?
पाश्चात्य शक्तिहरूबाट फिडिङ गरेको इन्टेलेक्चुअल डोमिनेसन हो यो । नर्वे, स्विडेन जस्ता मुलुकमा राज्यले चर्चका लागि कर सङ्कलन गर्छ । राज्यले चर्चका लागि काम गरेको छ । त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईं ? राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने मान्छेलाई त्यहाँको कुरा सोध्नुहोस् ।
तपाईंहरू वैकल्पिक शक्ति भन्दा पनि पूर्वराजावादीहरूको केन्द्र बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा कसो होला ?
तपाईंलाई त्यसो भन्न मन लागेको भए भन्नुहोस् । तर, हामी जनताको केन्द्र बन्न चाहन्छौँ ।
तपाईंहरूलाई पूर्वराजावादी र राजसंस्थाका लागि काम गर्ने शक्ति भन्दाचाहिँ के हुन्छ ?
तपाईंको इच्छा हो । धर्मवादी वा केके वादी भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् । यो खुला समाज हो । बरू हामी यो सरकारलाई प्रतिगमनको सरकार भन्छौँ । ५ अर्ब रूपैयाँ वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने, ७० करोड रूपैयाँ घूस माग्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने सरकार प्रतिगामी होइन ? हामी यो प्रतिगामी सरकारविरूद्ध जनतामा जान्छौँ ।
तपाईंहरूको यो एकतालाई कतिपयले संशयको नजरले पनि हेरेका छन् । तपाईंको पूर्वराजासँगको भेटपछि यो एकताले गति लिएको भन्ने छ । त्यस्तो हो ?
पूर्वराजा मात्र किन ? मैले प्रचण्डसँग पनि केही समयअघि भेटेको छु । नेताहरूसँग भेट हुनु नयाँ कुुरा भएन । पूर्वराजा नेपालको एक प्रभावकारी व्यक्ति हो । पूर्वराजा, पूर्वगुरू, पूर्वनेता सबैसँग भेट भइहाल्छ नि ! नभेट्नु बरू कमजोरी हो ।
पूर्वराजासँग के कुरा भयो ?
के सुन्न मन लागेको छ तपार्ईलाई ?
भन्नुहोस् न खास कुरा के भएको हो ?
पूर्वराजासँग करिव १ घण्टा कुराकानी भयो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकास बलियो होस् भन्ने उहाँको स्पष्ट धारणा पाएँ ।
राष्ट्रियताको मामिलामा त कसैससँग झुक्दिनँ, जनताको शिर निहुरिन दिन्नँ भन्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लिएर केपी ओली सरकार अगाडि बढिरहेकै छ त ?
केपीजीले भारतको नाकाबन्दीको विरोध गर्दा सबभन्दा बढी समर्थन गर्ने पनि मै हुँ । जब जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध बलियोसँग जोडिन्छ, तब मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।
जनताले सरकारलाई पूर्ण विश्वास गरेको हुन्छ । मेरा लागि सरकार छ । यहाँ इमानदार मानिस छन् भन्ने जनताको विश्वास हुन्छ । अहिले राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध यस्तै छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २८, २०७६, १२:२४:००